Mashandisiro ekuita chero chifananidzo senge kumashure kweiyo WhatsApp chat | IPhone nhau
Mashandisiro ekuita chero chifananidzo senge kumashure kweiyo WhatsApp chat
WhatsApp haisati yambozivikanwa seimwe yeanoshandisa izvo zvimwe sarudzo dzinopihwa kana zvasvika pakuzvigadzirisa. Kana kana zvasvika pakupa mabasa matsva sezvo ichinyanya kupirwa kutevedzera zvinoshanda uye kutonhora yezvimwe zvinoshandiswa (kunyanya Teregiramu), zvichireva kuti dhipatimendi rekugadzira haripo, sezvazvisiri paFacebook kana Instagram.
Mwedzi mishoma yapfuura, WhatsApp yakagadziridzwa kuwedzera mameseji mashoma, mameseji anonyangarika mushure memazuva manomwe. Iyo imwechete yekuvandudza yakawedzerawo basa nyowani, rakafanana neiya rakatopihwa neTeregiramu, iyo inotibvumidza isu shandisa chero mufananidzo kubva kuchinhu chedu sekutaura kumashure. Kana iwe uchida kuziva mashandisiro ekuita chero chifananidzo senge kumashure kwechero chat paWhatsApp, ndinokukoka iwe kuti uenderere mberi nekuverenga.
Chinhu chekutanga chatinofanira kuziva ndechekuti kutsiva iyo yemuno WhatsApp kumashure kwenyaya yedu ibasa rinowanikwa zvese mumatauri ega ega uye mumapoka ehurukuro. Chimwe chinhu chatinofanira kuziva ndechekuti mifananidzo yatinoratidza zvinongoratidzwa chete mukutaura kwedu, usambofa wakataurirana nevamwe vanhu. Kamwe, isu takajeka pane aya maviri mapoinzi, isu tinotanga netsananguro.
Kana tangovhura WhatsApp, tinoenda ku hurukuro yatiri kuda kuwedzera mufananidzo yatakachengeta muApplication application.
Tevere, tinya pazita remunhu kana boka kuti uwane sarudzo uye dzvanya pairi Wallpaper uye kurira.
Tevere, tinodzvanya Sarudza Wallpaper nyowani.
Muhwindo rinoratidzwa pazasi, tinogona kusarudza mavara Chiedza, Rima uye Solid Colors. Pakuguma chaipo, sarudzo yekuwedzera mifananidzo yechishandiso inowoneka Mifananidzo.
Kana tadzvanya pane iyi sarudzo, isu tinongofanirwa kusarudza kuti ndeipi pikicha yatinoda kuratidza uye tinya pairi Pin up.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Mashandisiro ekuita chero chifananidzo senge kumashure kweiyo WhatsApp chat
Mhedzisiro yekutanga yeTikTok inosvika inoenderana neLiDAR scanner yeiyo iPhone 12 Po
Iyo nyowani WhatsApp yekuvanzika mutemo inoda kuti isu tigovane yedu data neFacebook